Top 3 Free Photo onyenlereanya - The Best Photo Ile Ihe Software
> Resource> Free> Top 3 Free Photo -Ekiri maka Windows
Ndabara foto onyenlereanya nke na-abịa tupu arụnyere na Windows usoro bụ ezughị? Nwere ọtụtụ puku foto iji hazie na gị disk? E nwere ọnụ ọgụgụ nke magburu onwe free foto onyenlereanya uzo ozo ka Windows ndabere foto nkiri. Isiokwu a ga-ịme ka ị 3 free foto ndị na-ekiri ndị na-dakọtara na Windows usoro. Nwere anya na họrọ onye gị mkpa.
Free Photo onyenlereanya 1: FastStone Image onyenlereanya
FastStone Image onyenlereanya bụ onye ọrụ-enyi na enyi, anụ na ngwa ngwa image onyenlereanya software, nke na-akwado niile isi graphic formats gụnyere BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA na ụfọdụ ndị ọzọ Raw faịlụ na ụdị. FastStone Image onyenlereanya enye magburu onwe ihuenyo zuru echiche na omenala thumbnail size (isi mkpịsị aka nchekwa data nke oyiyi maka ngwa ngwa nchọgharị ka azụmahịa foto onyenlereanya ACD Lee). Plus, The faịlụ Explorer, ọkacha mmasị na Tag ngwaọrụ-enyere gị aka mfe agagharị oyiyi na nwere ihe kasị mma oyiyi ikiri ahụmahụ.
Free Photo onyenlereanya 2: XnView
XnView-ewere dị ka ihe niile na-na-otu image onyenlereanya, nchọgharị na Ntụgharị na nkwusa na saịtị. Ọ na-akwado ihe ndị kasị image formats - 400 ibubata & 50 bupu. XnView nwere ike rụọ ọrụ nke ọma ele, ụdị, nchọgharị na tọghata gị niile oyiyi. Ọ na-enyere a thumbnail cache maka ngwa ngwa image ikiri, ma ka ngwa ngwa na-enweghị oghere. Plus, Ọ na-enye nhọrọ dezie foto na mpụga foto nchịkọta akụkọ dị ka Photoshop, ka ogbe nhazi oyiyi, ike image slide show, na ndị ọzọ na mgbakwunye.
Free Photo onyenlereanya 3: IrfanView
IrfanView bụ nnọọ obere, kọmpat na ngwa ngwa foto onyenlereanya na nnukwu faịlụ Ọkpụkpọ nkwado. Ọ n'ezie ekewa ihe Image onyenlereanya na tọmbneelụ Nchọgharị. The image onyenlereanya bụ ukwuu customizable. Mgbe ị na-maara na interface, ị ga-enweta ihe kasị mma foto Explorer ahụmahụ na ya. Rịba ama na Google toolbar na Desktọpụ Search installers-bundled, uncheck nhọrọ ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị mgbe wụnye.
Rịba ama: Ọ bụrụ na i nwetara nza nke photos, i nwere ike iji Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe na-atụgharị foto na vidiyo na Hollywood-ịke fim ma na-eso na weebụsaịtị gụnyere YouTube, Facebook. I nwekwara ike ọkụ gị moives ka DVD na-ekiri na TV na-ewu ewu mobile ngwaọrụ dị ka iPod / iPhone / iPad, PSP, Android igwe, wdg O ga-eme ka gị video ọzọ larịị na itu n'anya enyi.